Indlu enkulu eseduze noRold Skov no-Aalborg
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Anja
Uma uya eholidini nomndeni wonke - khona-ke kukhona indawo yawo wonke umuntu esikoleni esidala phakathi nedolobhana elincane lase-Aarestrup.
Indlu itholakala esigodini esithokomele i-Aarestrup esimema ukuthula, ukuphumula kanye nokuzijabulisa nomndeni. Ngemuva kwendlu kunechibi elihle kakhulu ukuhambahamba kancane kusihlwa.
Eduze nehlathi lase-Rold (ihlathi elikhulu kunawo wonke e-DK) elihlinzeka ngemisebenzi eminingi ehlukene njengokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukuhamba ngezikebhe nokuhamba okungapheli.
Ngemoto: 20 min ukuya e-Aalborg, 1 ihora ukuya e-Aarhus, 10 min ukuya eStøvring.
Endlini uzothola igumbi lokuphumula elikhulu, lapha kukhona i-TV ene-playstation (ukufinyelela ku-Netflix, i-Amazon prime, i-HBO ne-Playstation Now). Ekamelweni lokuphumula kukhona nendawo yokudlala kanye ne-swing (engasuswa uma ifunwa).
Eduze kwetafula lokudlela kukhona indawo yabantu abangu-8. Inganwetshwa ibe yi-10 uma uhambisa itafula elincane ehholo lokungena phezulu. Kukhona isihlalo esiphezulu (kanye nesengeziwe ngaphandle). Kunekhishi elikhulu nelimnandi endlini, elinohhavini omkhulu nezimbawula ezi-5.
Kunamakamelo okulala ama-2 phansi. Eyodwa enombhede ophindwe kabili, enye inombhede omkhulu (90 * 200cm).
Esitezi sokuqala kunamakamelo ama-3. Omunye onombhede owodwa, omunye (ihhovisi / igumbi elihlanganyelwe) elinombhede owodwa futhi owokugcina unombhede onobude obuyingxenye (90 * 200), umbhede omncane, umbhede kanye nombhede wamaphupho. Ngakho kunemibhede eyi-10. Engadini kukhona netende elinegumbi laba-3.
Kunamagumbi okugeza angu-2 endlini. Eyodwa egumbini lokuhlala futhi enye ikwisitezi sokuqala. Igumbi lokugezela elikhulu eliphansi linendawo yokugeza, isomisi, umshini wokuwasha nendawo yokushintsha. Esitezi sokuqala kuneshawa.
Kunama-stair railings ezitebhisini ezingezansi.
Mayelana nendlu kukhona phambi kwegceke elihle futhi elibiyelwe. Lapha ilanga likhanya usuku lonke. Egcekeni kunetafula lokudlela elinezihlalo eziyisi-8 kanye nesihlalo esiphezulu esingu-1. Kukhona ukuhlelwa kukasofa. Kukhona i-sandbox, igoli lebhola kanye namabhola. Kukhona ne-grill encane engadini.
Ngemuva kwendlu kukhona indawo yokushisa, indawo yokomisa kanye netende - kanye nombono omuhle wechibi lomgwaqo wedolobha kanye nechibi.
Ingabe unayo imoto kagesi? Khona-ke ungakwazi ukushaja imoto yakho kwesokudla egalaji :) Vele ukhumbule ipulaki lesifanele. Kukhona futhi amashaja asheshayo e-Tesla, Eon kanye ne-Clever e-Haverslev (5 km ukusuka lapha).
Uma udinga i-pram, kuyenzeka futhi ukuboleka eyethu.
3.25(4 okushiwo abanye)
3.25 · 4 okushiwo abanye
Indlu itholakala ngasehlathini elikhulu kunawo wonke laseDenmark i-Rold.
Ihlathi liyindawo esobala yokuhamba okuphumuzayo noma ukugibela ibhayisikili lezintaba, kungenzeka ukuqasha amabhayisikili ezindaweni eziningana.
I-Rebild hills ikufanele ngempela ukuvakashelwa - kuwuhambo olujabulisayo futhi ngezinye izikhathi oluyinselelo.
Indlu nayo iyimizuzu emi-5 kuphela ngemoto usuka eHaverslev, lapha uzothola iMcDonalds, iBurger King, iSunset, iGrill nePizzaria.
Vi er en familie på 6, heraf 4 drenge fra 2006, 2010, 2016 og 2019. Vi ønsker at leje vores hus ud i de perioder hvor vi selv er på ferie eller weekendture.
Ngingathintwa ngomlayezo futhi ngiphendule ngokushesha. Kodwa ngiseholidini nomndeni wami - ngakho-ke mhlawumbe kuzoba nesikhathi sokuphendula.